Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/03/2020)
Kulula ukuba uzive udiniwe nelidangeleyo ngexesha uhambo olude. Emva ehleli uloliwe iiyure, kubalulekile ukuba wolule imilenze yakho xa kunokwenzeka. A uhamba elifutshane enkantini kuya kukunceda ukuba usebenzise ixesha kunye ukuze sizive agcwalisiwe. Ulihambe neenqwelwana ukuya sidliwe, Jonga kwi imbonakalo-mhlaba kwaye sibe ezinye izimuncumuncu kunye isiselo yakho oyikhethileyo
Ukuhamba ngololiwe ingaba ulwazi loluntu. Ukudibana nabantu abatsha koololiwe kulula ngaphezu kwezinye iindlela izithuthi. Ngokungafaniyo indiza, ukuba inkululeko ukuhambahamba kwaye zizibandakanye nabanye abahambi. Kuyinto umdla into sinokukufunda kwabanye abantu amabali – sithethe ngobomi, ukusebenza uze ukhule inethiwekhi yakho. Ask the person next to you about the book their reading, ubatshangatshangise ilekese okanye kubetha nje ingxoxo malunga indawo ekuyiwa kuyo ke ukuba uhambela. It liyadlula iincoko unayo lo gama abahamba Europe ngu loliwe oko kudala iinkumbulo njalo.
I uhambo olude na ngamanye amaxesha ngamaxesha kuphela ezizolileyo ngexesha lakho uhambo. Kunokuba ithuba kwamnandi ukuba imane nokulungiselela indawo ozikhethileyo. Basele plenty amanzi, sitye ukutya kwaye xa kunokwenzeka, ubuthongo. Ukusebenzisa ngobulumko uhambo lwakho Uloliwe olude kuya kukunceda ukuba uzive sihlaziyekile akukhuthalele - ilungele indawo yakho elandelayo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/things-long-train-journeys/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)